Hery Rajaonarimampianina : « Tsy afa-misaraka ny finoana sy ny fampandrosoana » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Tsy afa-misaraka ny finoana sy ny fampandrosoana »
Hery Rajaonarimampianina : « Tsy afa-misaraka ny finoana sy ny fampandrosoana »
03/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
‘’Mijoroa amin’ny fahamarinana ,tezao ny olona amin’ny finonana maha kristianina, izany no zava-dehibe hampandrosoana ny firenena ,mijoroa ianareo’’io no nambaran’ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenany tany Manakara nandritra ny jobily faha-76 ny toby Ankaramalaza ,sy fanokanana ihany koa ireo mpiandry miisa 415 . Mbola nohamafisin’ny filoham-pirenena ihany koa amin’ny maha krisitianina azy fa ‘’ tsy afa- misaraka ny finoana sy ny fampandrosoana’’, satria dia tsy ho tanteraka tokoa ny asa raha tsy misy izay finoana izay. Fanirian’ ny Filoham-pirenena ihany koa ny ahazoan’ ny vahoaka Malagasy miaina amin’ ny maha-Kristianina, indrindra isan’ andro satria raha mijoro amin’ ny tena maha-Izy azy ny Kristianina hoy ny filoha dia’’ ho resy ny herisetra, ho resy ny kolikoly, ho resy ny halatra’’ hoy hatrany izy.
Teny filamatra nalaina kosa ny hebreo toko faha-12 izay noentina nandritra ny fankalazana sy ny fanokanana, raha tsiahivina moa dia toby natsangan’i Nenilava ny taona 1945 ny toby ao Ankaramalaza ary ny fiangonana FLM no mpiahy azy. Nandritra ity fivahinianan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina aty Manakara ity ihany koa no nanolorany fitaovana fitsaboana ho an’ny tobim-pahasalamana , ka fitaovana tahaka ny fandidiana no natolotra tamin’ izany. Io fitaovana io izay natokana handidiana ireo aretina rehetra izay mpahazo ny vehivavy, ka anisan’ny nahazo tombony amin’ izany ireo mponina ao Manakara. Ankoatra izay dia nambaran’ny filoha ihany koa hamboarina avokoa , ny lalana ao an-tampon-tanànan’i Manakara . Ankoatra ny fanokanana ireo mpiandry tao Ankaramalaza moa dia nisy ihany koa ny fihaonana tamin’ ireo tompon’andraikitra tany an-toerana, nitondra ny toromarika sy nijerena ny ezaka fampandrosoana. Nanatrika tany an-toerana ny moa ny praiminisitra lehiben’ny governemanta sy ireo mambran’ ny governemanta
Scotty Strowd dans « Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »
Haino amanjerim-panjakana : Napetraka ao Toliara ny haitaon’ny TNT
Fahitalavitra malagasy voalohany maharakotra an’i Madagasikara. Nofidiana hankalazana ny faha -50 taonan’ny fahitalavitra Malagasy, na ny TVM ny tanànan’i Toliara, ary nifanindran-dalana tamin’izany ihany koa ny fametrahana sy fampandehanana ny TNT, na ny Télévision Numérique ...Tohiny
Fiarahan’ny TIM sy Mapar : Tezitra ny AV7
Scotty Strowd: https://devrim35site.wordpress.com/